Seenaa Roobart Mugaabee - BBC News Afaan Oromoo
Seenaa Roobart Mugaabee
Image copyright DESMOND KWANDE
Roobart Mugaabeen bara 1980 irraa kaasee hanga bara 1987tti Ministira Muummee, bara 1987 hanga ammaatti ammoo Pireezidaantii Ziimbaabwee ta'uun tajaajilaa jiru.
Bara 1924 kan dhalatan Robert Gabri'eel Mugaabeen, pireezidaantii dulloomaa addunyaa kanaa aangorra jiran jedhamanii beekamu.
Mana barumsaa Miishinii Kutama fi Empandeni jedhamutti baratan
Digirii duraa Yuunivarsiitii Fort Hare, Afriikaa Kibbaa irraa bara 1951, Seenaa fi Ingiliffaan
Yuunivarsiiti Afriikaa Kibbaa UNISA fi Yuunivarsiitii Landan UoL irra barnoota fagootiin digiriiwwan 6
Walumaa galatti digirii kabajaa dabalatee, digiriiwwan 22 qabu jedhama
Zimbaabuween bittaa warra adii jalaa bilisa akka baatu, paartii ZANU hogganuun qabsaa'aa turan. Bara 1964 hanga 1974tti mana hidhaa turan.
Yeroo jalqaba filataman, warreen adii fi morkattoota siyaasaa kan biroo sirriitti falmachuu akkasumas ilaalcha siyaasaa gocha irratti xiyyeeffate qabaniin ture kan jajaman.
Haa ta'u malee yeruma sanatti Paartii Tokkummaa Biyyaalessaa (NUP) Kibba biyyattiitti bu'uura cimaa qabu dhiisuun partii mormituu hundeessani. Kunis lubbuun namoota kumaatamaan lakka'amanii akka darbu sababa ta'e.
Walakkeessa bara 1990tti sagantaa lafa deebisanii hiruu jedhuun abbootii lafaa adii irraa humnaan lafa fuudhanii lammilee biyyattiif gurraachotaaf qoodan. Kun gama tokkoon deeggarsa gama kaaniin ammoo mormii cimaa itti fide.
Akkuma mormitoonni isaanii baay'achaa dhufaniin, fedhiin paartiin isaanii Zanu-PF fi Mugaabeen angoorra turuuf qaban dabalaa dhufe. Qeeqxonnis mootummaa abbaa irree hundeesse jedhuun.
Filannoo bara 2008 taasifameen marsaa duraatiin paartiin Zanu-PF teessuma paarlaamaa heedduu argachuu hin dandeenye. Dursaan paartii mormituu Moorgaan Shaangiraay ammoo Mugaabee injifatan.
Haa ta'u malee sagaleen argatan kana kabajuuf eeyyamamoo hin taane.
Adeemsi filannoo kun hedduu kan qeeqame ture. Kanarraa ka'uunis Mugaabeen angoo akka hiraniif hawaasa adduunyaarraa dhiibbaan irra gahe.
Kana bu'uureffachuun morkataan isaanii Moorgaan, Muummee ministraa ta'uun muudaman. Mugaabeen garuu akka itti hin tolle ifatti mul'isaa turan. Kanaanis Moorgaan Shaangiraay himannaa dhiheeffataniiru.
Goodayyaa suuraa Moorgaan Shaangiraay, dursaa paartii mormituu
Waggoota muraasa booda bara 2013tti paartiiwwan lameen Heera mootummaa haaraa barreessuuf waliigalan.
Heerri kunis pireezdaantiin tokko marsaa lama caala akka hin dorgomne taasisuu, qaamni seera baasu naannoorra akka jiraatu gochuufi muumichi ministiraa akka hin jiraanne kan jedhan of keessatti qabata ture.
Baruma kanatti filannoo taasifame Mugaabeen sagalee 61% argachuun Shaangiraay yoo moo'an, paartiin isaanii Zanu-PF teessuma paarlaamaa haraka 2/3 argate. Kunis Shaangiraayiif kan liqimfamu hin turre.
Dhuma bara 2014, Mugaabeen Pireezdaantii itti aanaa kan turan Jooyis Mujuuruu fi ministiroota 7 na ajjeesuuf yaalaniiru jechuun hojiirraa ari'an. Mujuuruun garuu himannaa kanatti walii hin galle ture.
Ilaalchi siyaasaa isaanii namoota bara 1960 keessa bilisummaaf falmachaa turaniin kan wal fakkaatu, biyyoota dhihaa fi yaada kaapitaaliizimii ija shakkiin kan ilaalanii fi mormitootaaf obsa kan hin qaban jedhamanii komatamu.
'Nuti dubartoonni harka bareedduu qabna'
Qarshiif jecha 'hiriyyoota abbaakootu na gudeede'
Cabaan qaama xiyyaara Chiilii argame